खोसियो विपन्नको गास, सडकमा खाना खुवाउँदा महानगरलाई लाज ! « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » खोसियो विपन्नको गास, सडकमा खाना खुवाउँदा महानगरलाई लाज !
खोसियो विपन्नको गास, सडकमा खाना खुवाउँदा महानगरलाई लाज !
nepaltube Published On :3November, 2020
काठमाडौं । खुलामञ्चमा खाना खुवाउने अभियानमा काठमाडौं महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ । सडकमै खाना खुवाउँदा आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै महानगरपालिकाले खाना वितरणमा रोक लगाएको हो ।
केही अभियन्ताहरुले लामो समयदेखि खुलामञ्चमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरीब र असहायलाई खान वितरण गर्दै आएकोमा तीनदिनदेखी महानगरबाट खटाइएका नगर प्रहरीले अवरोध गरिरहेका छन् । पहिलो पल्ट ३ दिनअघि नगर प्रहरीले खाना खुवाउने अभियान रोक्न आग्रह गरेको थियो । रपनि अभियन्ताहरुले खान खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिएपछि सोमबार महानगरपालिकाले पुनः नगर प्रहरी पठाएर खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । सईको नेतृत्वमा आएको नगर प्रहरीले ‘मेयरसापको आदेश’ भन्दै खाना वितरणमा रोक लगाएको अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
हाल सडकमा खाना वितरण गर्नु पर्ने कोही पनि नभएको निष्कर्षसहित खाना वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाको जिकिर छ । सार्वजनिकस्थलमा फोहोर भएको र सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएको भन्दै महानगरको निष्कर्ष छ । महानगरले कोही भौकै रहने अवस्था देखिएमा मानव सेवा आश्रममा लगेर खुवाउने जनाएको छ ।